Fiilo madow oo annealed ah
Silig annealed madow ayaa sidoo kale loo yaqaan silig bir bir madow, silig annealed jilicsan iyo silig bir bir ah annealed.
Silig Annealed waxaa lagu helaa iyada oo kuleylka kuleylka. Waxay ka samaysan tahay silig bir ah oo kaarboon ah.
Silig Annealed bixisaa dabacsanaan fiican iyo jilicsanaanta iyada oo loo marayo habka of annealing free oxygen. Iyo siligga saliida leh ee saliida leh waxaa lagu sameeyay habka silig-sawir, anneal, iyo saliida saliidda lagu durayo. Waxaan ku sameyn karnaa silig goyn toos ah waxaanan sidoo kale ku samayn karnaa shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha.
Silig Annealed bixisaa dabacsanaan fiican iyo jilicsanaanta iyada oo loo marayo habka of annealing free oxygen. Iyo siligga saliida leh ee madow waxaa lagu sameeyaa habka loo maro silig-sawir, anneal, iyo saliidda saliidda saliidda. Waxaan ku sameyn karnaa silig goyn toos ah waxaanan sidoo kale ku samayn karnaa shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha.
Qalabka siligga: sheyga siligga ugu muhiimsan ee silig annealed waa silig bir ah ama silig birta kaarboon.
Black Annealed Wire waxaa la geeyay dhismaha iyo beeraha labadaba. Sidaa awgeed, siligga annealed ee dhismaha madaniga ah, oo sidoo kale loo yaqaan 'silig la gubay' ayaa loo adeegsadaa dejinta birta. In beeraha silig annealed waxaa loo isticmaalaa for daayo caws.
Waqtiga xaadirka ah silig annealed waxaa si ballaaran loo isticmaalaa sida silig xarkaha ama silig bingel ee dhismaha, beeraha nasashada iyo maalin kasta ku xir.
Silig annealed Black waxaa inta badan baaraandegi galay silig gariiradda, silig spool, silig xirmo weyn ama sii toosay iyo jarjar silig cut iyo U nooca silig
Shayga Fiilo madow oo annealed ah Summad Gemlight ama OEM / ODM
Fasalka Birta Q195 Q235 Kaarboon kaarboon ama SAE1006 / 1008 Tepe silig Wareeg
Nooca Galvanized Fiilo madow oo annealed ah Dhexroor 0.3-6.0mm BWG8 # ilaa 36 # / eeg # 6 ilaa # 24
Heerka Dheeraynta 10% -25% Adeegga Hawlaha Laabaya, Alxamida, Feedhka, Dib u soo kabashada, Goynta
Gariiradda Miisaanka 2kg, 3kg, 10kg 25kg / coil ama sida la codsaday Heerka Dahaarka Zinc 8g-28g / m2
Awoodda siligga 350-550N / mm2 Daaweynta Sawirka siligga
Daawaha ama maya Maaha Dulqaad ± 3%
Silig annealed madow waxaa loogu talagalay in looga hortago miridhku iyo qalin dhalaalaya in midabka. Waa mid adag, adkeysi leh oo aad u fara badan; waxaa si weyn u isticmaala dhulalka, farsameeyayaasha farsamada, dhismaha iyo dhismaha, soosaarayaasha xargaha, dahablayaasha iyo qandaraaslayaasha. U diidnimadeeda miridhku waxay ka dhigeysaa mid waxtar badan u leh hareeraha markabka, iyo barxadda dambe, iwm.
Xadhig bilaash ah oo silig bir ah, Dhismaha, shaqada qaabdhismeedka Beeraha, Dayrarka, Meeshooyinka, iyo adeegsiga weyn
Filim balaastik ah oo lagu duubay gudaha, maro Hessian ama bacda lagu duubay oo ku duuban banaanka.
Xirmooyinka tafaariiqda ayaa la heli karaa
Waxaa loo buuxin karaa sidii loo habeeyay
Hore: Eletro silig galvanized
Xiga: Silig galvanized Hot diidan
Xayndaabka ka soo horjeedka fuulista
Fiilo isku xidhan
Birta silig bir ah
Beer Ama Xayndaab Lo '
PCV Wire dahaarka leh
Ku Xidh silig
U Nooca siligga
Eletro silig galvanized
Silig galvanized Hot diidan